Get Even ဂိမ်းဟာ ပိုလန်လူမျိုး developer ဖြစ်တဲ့ The Farm 51 က ဖန်တီးထားတဲ့ action အမျိုးအစားပါဝင်တဲ့ First Person Shooter Horror အမျိုးအစား ဇာတ်လမ်းသွားဂိမ်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ The Farm 51 ဟာ NecrovisioN franchise နှင့် နောက်ဆုံးထွက် Painkiller စီးရီးတွေ ကြောင့် လူသိများပါတယ် ။
စွန့်ပစ်ထားတဲ စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ရုံထဲ မေ့မျော့ရာကနေ နိုးထလာတဲ့ Cole Black ဆိုတဲ့ အငှါး သေနတ်သမားတစ်ယောက် နေရာကနေ ဆော့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Black ဟာ သူ နိုးထလာတဲ့အချိန် သူ့ မှတ်ဥာဏ်ထဲ ဘာမှ မရှိ ။ အမည်ဝှက် Red ဆိုတဲ့သူရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ လှုပ်ရှားနေရတဲ့ black ဟာ ဗုံးတွေ ချိတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကယ်တင်မယ်ဆိုတာပဲ သူ့ခေါင်းထဲ ရှိပါတယ် ။ Black က သာမာန်လူ မဟုတ် ။ ထူးဆန်းတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာက သူဦးနှောက်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ။ ဒီအရာက သူ့ကို ဘယ်အချိန်မဆို မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်ခေါ် ပြန်ဖတ်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးတယ် ။ ဘာကြောင့် သူ ဒီကို ရောက်နေတာလဲ? မိန်းကလေးကရော ဘယ်သူလဲ? အခုရောက်နေတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိရဖို့ black ဟာ သူ့အရင်က မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်ဖော်ရပါတော့တယ် ။ cutsense တွေ dialogue တွေ ကြည့်ခြင်း ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ဇာတ်လိုက်အကြောင်း သိလာရမှာ ဖြစ်သလို ဂိမ်းထဲ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ၊ လူတွေကို မေးမြန်းစကားပြောခြင်းအားဖြင့် ကစားရင်း ဇာတ်လမ်းအကြောင်း တဖြည်းဖြည်း သိလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Get Even ဂိမ်းရဲ့ graphic ဟာ unreal engine အသုံးပြုထားကာ အခုခေတ်နည်းပညာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလည်း အပြင်က တကယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အစစ်မျိုးဖြစ်အောင် ၊ လူဆိုလည်း တကယ့်လူအစစ်မျိုး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာကြောင့် ကစားတဲ့အခါ တကယ့် ကမ္ဘာငယ်လေးထဲ ကိုယ်တိုင် ရောက်နေသလိုမျိုး ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Get Even ဂိမ်းဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် လူအများ စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးရရှိနေခဲ့တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Get Even ဂိမ်းဟာ PlayStation 4, Xbox One, နှင့် PC အတွက် လာမယ့် မေလ ၂၆ ရက်နေ့က ဥရောပမှာ ထွက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ publisher Bandai Namco နှင့် developer The Farm 51 က ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။